गुल्मी र बागलुङ जिल्लाका फाँटहरुमा धान पाकेर पहेँलपुर : कोदो स्याहार्नको चटारो ! – ebaglung.com
गुल्मी र बागलुङ जिल्लाका फाँटहरुमा धान पाकेर पहेँलपुर : कोदो स्याहार्नको चटारो !
२०७४ कार्तिक १०, शुक्रबार १७:५६	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
सन्ध्या बस्नेत, गुल्मी २०७४ कात्तिक १० । गुल्मी र आसपासका जिल्लाहरुमा यति वेला धान र कोदो स्याहार्नको माचो भई रहेको छ । हस्तीचौरको राताडाँडा नजिकैको फाँट धान पाकेर पहेँलपुर भएको छ । कृषकहरु धान स्यहार्न खलो लिपेर बसेका छन । निस्तेखोलाको उपल्लो फाँट यति वेला पहेँलपुर भएको छ ।
मुसिकोटका भित्री खेतहरु पनि धानपाकेर सुन्दर देखिएको छ । उता बडीगाड खोला वारी पारी विशेष गरी वामीटक्सारको फाँटले यति वेला थप सुन्दरता थपेको छ ।
उता छिमेकी जिल्ला बागलुको न्वाँरा फाँट, खारको फाँट र त्यो भन्दाँ माथी ग्वालिचौरका फाँटमा पनि धान पाकेर पहेंलपुर भएको छ । मुसिकोट गाउँमा कोदो काट्न सुरु गरिएको छ । कोदो मुसाले खाएर हैरान पारेको गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो एक जना कृषक महिला घर घरमा आँगन पोतेर कोदो स्याहार्ने तयारीमा छन कृषानहरु । कोदो मकै र धान खेती गुल्मीको परम्परागत खेती हो ।
पछिल्लो चरण यहाँका कृषकहरु परम्परागत खेती छाडेर तरकारी लगायतको व्यवसायिक खेतीमा लागेका छन् । परम्परा देखि स्वादिलो सुन्तलाको गाउँ भनेर चिनिने भाडगाउँका कृषकहरुले कोदो मकै रोप्ने वारीमा सुन्तला फलाउन थालेका छन् । यति वेला त्यस गाउँका सुन्ताला पाक्न थालेका छन वाटो र वेृारीभरी सुन्तालाका वोटहरुले भाँडगाउँ र उता बेँहोरो गाउँलाई सुन्दर हराभरा बनाएको छ ।
कुनै समय कुहेर खेर जाने वेलौती ( अम्वा ) समेत त्यहाँका कृषकहरुले बजार सम्म पुराएर बेच्न थालेका छन । तरकारी र दुधबाट पनि त्यहाँका कृषकहरुले मनग्एये आम्दानी लिदै आएका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर ३ का वडाध्यक्ष थम्मन केसी र अर्का युवा निरज मरासीनीले वार्षिक तिन चार लाख सम्मको सुन्ताला बेच्दै आएका छन् । दर्जनौ त्यहाँका कृषकले ठुृलो परिमाणमा सुन्तला खेत िगर्दै आएका छन् ।
मोटर बाटो खन्दा कुलो पुरिएपछि सामाचौरको सयौं रोपनी खेत बाँझै, किसान मर्कामा !
समाजबाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनका लागि बाम गठबन्धन आवश्यक : वक्ताहरु